Adam ဆို တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် က သူ့ ဂြိုလ် အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြနေတဲ့ ပုံနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို စထားပါတယ် ။ တခြား ဂြိုလ်တွေနဲ့ မတူပဲ သူတို့ ဂြိုလ်ဟာ မြေဆွဲအား နှစ်ခု ရှိနေခြင်းပါပဲ ။
အပေါ်မှာ နေတဲ့သူတွေက တော့ ချမ်းသာတယ် ။ ဂုဏ်ရှိတယ် ။ အောက်ဖက်မှာ နေတဲ့လူတွေကတော့ ဆင်းရဲတယ် ။ မျက်နှာမွဲတွေပေါ့ ။ အဲ့ဒီ့ ကမ္ဘာ နှစ်ခုဟာ တစ်ဘက်ကနေ တစ်ဖက်လည်း ကူးလူးသွားလာလို့ မရပါဘူး ။ Adam ကတော့ အောက်ဖက်မှာ နေတဲ့ လူတွေထဲက လူငယ်လေး တစ်ယောက်ပါ ။ တနေ့ Adam ဟာ နှစ်ကမ္ဘာ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တောင်ထိပ်ကို တက်သွားရင်း Eden ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့မိပြီး ချစ်ကြိုက်သွားပါတယ် ။
တနေ့မှာတော့ အောက်ကမ္ဘာခြမ်းကလူတွေဟာ Adam နဲ့ Eden ကို တွေ့ပြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့် Eden ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ် ။ Eden သေဆုံးပြီလို့မှတ်ယူသွားတဲ့ Adam ဟာ တစ်နေ့ မှာတော့ မမျှော်လင့်ပဲ Eden ကို TV ထဲမှာ မတော်တဆ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ..?
Eden နဲ့ Adan တို့ပေါင်းကြပါ့မလား ?
ကံတရားကြီးကကော မျက်နှာသာပေးပါ့မလား ?
ဆက်စပ်လို့ မရတဲ့ ကမ္ဘာ နှစ်ခုကနေ ဘယ်လိုများဆုံစည်းကြပါ့မလဲ ?
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အတူ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ခုပါ ။
သိပ်မကွာတော့တဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုမှာ လူသား မျိုးနွယ်စုဟာ Kaijus လို့ ခေါ်တဲ့ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနေရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ ဂြိုလ်သားတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် Jaegers လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်ကြီးတွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ Jaegers စက်ရုပ်ကြီးတွေကို လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ထိန်းချုပ် ခိုင်းစေရပါတယ် ။ Jaegers တွေဟာ Kaijus တွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်လှပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေက Jaeger Project ကို ဆက်မလုပ်ဖို့ တားမြစ်လုိုက်ပါတယ် ။ နောက်ဆုံးသော Jaegers လေးရုပ်ဟာ Hong Kong မှာရှိပါတယ် ။
တိုက်ပွဲ တစ်ခု အတွင်း သူ့အကို သေဆုံး ပြီးနောက် Jaegers တွေရဲ့ Pilot တစ်ယောက်အဖြစ်မှ အနားယူခဲ့တဲ့ Raleigh Becket ဟာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှု နဲ့ အတူ နောက်ဆုံး ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ Jaegers တစ်ကောင်ကို ကိုင်တွယ်ဖုို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက် သူ့ရဲ့ တွဲဖက် Pilot ကတော့ ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ Mako Mori ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ် ။ Mako Mori ဟာ ငယ်စဉ်က Kaiju တစ်ကောင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု အောက်ကို ရောက်ဖူးခဲ့ရာက ရရှိလာတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် Jaeger ကို ထိန်းချုပ်ရာမှာ အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ့ အချိန်မှာပဲ Newton Geiszler ဆိုတဲ့ သိပ္ဗံပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ Kaiju တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို ၀င်ပြီး ကြည့်ရှုနုိုင်တဲ့ စက်တစ်ခုကို တီထွင်နုိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ စက်ကို သုံးပြီး Newton Geiszler ဟာ Kaiju တွေကို ခြေမှုန်းနုိုင်မယ့် Kaiju တွေရဲ့မူလ ရင်းမြစ်ကို ရှာတွေ့ ခဲ့ပါတယ် ။
ကဲ အင်အားကြီးမားလှတဲ့ Kaiju တွေကို ခြေမှုန်းနုိုင်ပါ့မလား
Newton Geiszler ရဲ့ စက်ကကော ယုံကြည်ရပါ့မလား ?
ဟာ ခနဲ ဟင် ခနဲ နေအောင် ကြည့်ရမယ့် Animation ဇာတ်လမ်း သိပ္ဗံ ကား တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
IMDB Rate ကလည်း 7.8 ဆိုတော့ လုံးဝ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ။
Copy Right by Movie Relaz. Powered by Blogger.